Ragga qaba macaanka ama Sonkorta oo la ogaaday in ay u fiican tahay Galmada badan. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Wasmo Ragga qaba macaanka ama Sonkorta oo la ogaaday in ay u fiican tahay Galmada badan.
Ragga qaba macaanka ama Sonkorta oo la ogaaday in ay u fiican tahay Galmada badan.
Bulsha:- War bixin goordhow soo baxday ayaa lagu sheegay in Ragga Sonkorta qaba ay u fiican tahay galmada badan,taas oo raga qaba Sonkorta qeyb weyn ka qaadan karta baxnaanada Caafimaadkooda.
Warbixintan ayaa markii ay soo baxday waxaa layaabay dumar badan oo kamid ah fartuun fatuurad, xaliimo xaax, iyo dumar kale oo Caalamka ku nool.,waxaadna ku xaqiijin kartaan dhammaan dadkan Facbook ayey is ticmaalaana Magacyadan halagu raadiyo.
Inkastoo Warbixintan ay tahay mid muhiim ah hadana waxaa haboon in ay qaataan raga qaba Cudurkan halista ah ee Macaanka.
Warbixinta ayaa sdoo kale waxaa ay tilmaameysaa in habeenkii uu qofka sameeyo ugu yaraan 4 Jeer oo Galma ah iyo ugu yaraan laba mar oo aroortii ah ,waxaana gubaal ah in ay wax weyn ka badali karto Caafimaadka.
Gabar u dhalatay dalka Ukrain oo dhaqtarad ah ayaa warbixintan xaqiijiyay iyada iyo Dhaqaatiir kale oo Caalamka ku nool.